Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Jet2 dia manafatra fiaramanidina A15neo vaovao 321
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny fiaramanidina vaovao dia hamboarina ho an'ny seza 232 miaraka amin'ny tranobe Airspace misy jiro manavao, vokatra azo hipetrahana vaovao ary fitoeram-paosy 60 isan-jato lehibe kokoa ho an'ny tahiry manokana.
Ny kaomandy vaovao dia mandray ny kaonty totalin'ny seranam-piaramanidina Leeds, United Kingdom, miisa 51 A321neos.
Ireo baiko roa an'ny fiaramanidina dia taratry ny fanitarana andian-tsambo mahery vaika Jet2.com sy ny fanavaozana ny drafiny.
Ny fiaramanidina vaovao dia hapetraka ho an'ny seza 232 miaraka amin'ny tranobe Airspace misy jiro vaovao.
Jet2.com dia nametraka baiko fanampiny ho an'ny A15neos 321 manaraka ny iray voalohany ho an'ny 36 napetraka tamin'ny Aogositra 2021. Mahatratra hatrany amin'ny 51 A321neos ny zotram-piaramanidina Leeds, United Kingdom. Taratra ireo baiko roa Jet2.comdrafitra fanitarana sy fanavaozana ny sambo. Ny fifidianan'ny motera dia hatao amin'ny daty manaraka.
vaovao Jet2.com Ny fiaramanidina dia hamboarina ho an'ny seza 232 miaraka amin'ny tranobe Airspace misy jiro manavao, vokatra mipetraka vaovao ary fitoeram-paosy 60 isan-jato lehibe kokoa ho an'ny tahiry manokana.
Ny A320neo Family dia mampiditra ny haitao farany indrindra, ao anatin'izany ny motera vaovao sy ny Sharklets, izay manome fihenan'ny 20 isan-jato amin'ny fanjifana solika isaky ny seza. Miaraka amin'ny elanelam-potoana fanampiny hatramin'ny 500 kilometatra an-dranomasina / 900 km. na karama fanampiny roa taonina, ny A321neo dia hanatitra ny Jet2.com miaraka amin'ny mety ho fidiram-bola fanampiny.
Tamin'ny faran'ny volana aogositra 2021, ny A320neo Family dia nahazo baiko hentitra 7,500 mahery tamin'ny mpanjifa 120 manerantany.
Jet2.com voafetra, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Jet2, dia zotram-piaramanidina britanika vidina fialan-tsasatra kely manolotra sidina voatondro sy sambo avy any Angletera. Hatramin'ny taona 2019, izy no zotram-piaramanidina lehibe indrindra fahatelo any Angletera, ao aoriany EasyJet sy British Airways.
Ny fianakaviana Airbus A320neo dia fampivoarana ny fianakavian'i A320 mpandeha fiaramanidina lava vatan'ny Airbus. Ny fianakaviana A320neo dia mifototra amin'ny A319, A320 ary A321 teo aloha, izay nantsoina hoe A320ceo, ho "safidy motera ankehitriny".
Ireo mpitarika maneran-tany dia matoky amin'ny dia feno...
Otrik'aretina COVID Monster Vaovao: Miala amin'ny vaksiny, miparitaka haingana